Sida loogu daro muddada tababarka ee Apple Watch | Wararka IPhone
Sida loogu daro mudada jimicsiga Apple Watch
Mid ka mid ah xulashooyinka aan ku heli karno Apple smart watch in muddo ah ayaa ah ikhtiyaarka in lagu daro waqtiga ugu badan ee jimicsiga. Waa run dadka intiisa badan ee aan aqaan iyo dadka aan si fudud u weyddiiyo waxay hawlgeliyaan tababbarka markay bilaabaan oo waxay hawlgeliyaan markii uu dhammaado ... Tani waa wax caadi ah oo xitaa aan ku sameeyo tababarka, laakiin waad ku barnaamijsan kartaa ugu badnaan iyaga dhexdooda.
Kicinta iyo ka joojinta shaqadu waa tababar caadi ah oo loo yaqaan "Bilaash" oo ku saabsan Apple Watch waxaana loo isticmaalaa tababar kasta oo aan qabanno. Laakiin markan waxaan arki doonnaa mid kale oo ka mid ah xulashooyinka tababarka ee aan ka heli karno barnaamijka laftiisa iyo in qaar ka mid ah kuwa jooga aysan garanayn, Muddada waqtiga tababar kasta ee uu adeegsado adeegsadaha.
Sideen ugu dari karnaa ugu badnaan waqtiga tababarka Apple Watch
Hagaag, ikhtiyaarkan waa mid aad u fudud in la fuliyo waxaana si toos ah looga hawl gelin karaa codsiga Waxqabadka ee saacadeena. Si tan loo sameeyo, waxaan aadeynaa astaanta cagaaran ee "qofka ordaya" si aan u hawlgalno jimicsi isla markaana gudaha gudaha waxaan raadineynaa tababbarkayaga. Halkaa markay marayso waa inaan gujino saddexda qodob ee aan ku leenahay dhinaca midig ee sare (…) ka dibna riix «Duration».
Waqtigan xaadirka ah waxaan heleynaa ugu badnaantii aan ku gaarnay tababarkan iyo suurtagalnimada in la dejiyo tababar waqti ah oo aan rabno. Xaaladdayda waxay u dhigantaa 43 daqiiqo laakiin waxaan ku beddeli karaa kor ama hoos calaamadda - iyo + u muuqata waqtiga xiga, marka aan gaarno yoolkan saacaddu waxay noo sheegaysaa inaan dhammaynay tababarkii oo aan joojin karno. Haddii aan la joojin saacadda waxay sii wadaysaa tirinta dhib la'aan markaa ha ka welwelin. Ma ka warqabtay xulashadan tababarka ee Apple Watch?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Sida loogu daro mudada jimicsiga Apple Watch
Waa tan waxa ku cusub macruufka 5 beta 13
Satechi M1, jiirka iPad-kaaga iyo Mac-kaaga qaabka Apple